Ku taageer Cunnooyinka giraangiraha mutadawiciinta iyagoo iibsanaya kaararka gaaska
Iyada oo qiimaha gaasku uu gaadhay heerarkii ugu sarreeyey, waxaanu ku siinaynaa fursad aad ku taageerto mutadawiciinta Cunnooyinka Gawaarida ku deeqida kaararka gaaska. Kaararka gaasta ee deeqda ah waxaa loo qaybin doonaa mutadawiciinta Meals on Wheels ee deegaanka si ay u sii wadaan inay cunto u helaan deriskayaga u baahan.
Cunnooyinka Taayirada Wadooyinka kuma deeqaan oo kaliya waqtigooda, laakiin baabuurtooda gaarka ah markay cuntada geynayaan saacada qadada. Wadooyinku guud ahaan waxay ka hooseeyaan 10 mayl waxayna ku urursan yihiin xaafadaha dhexdooda si ay u qaataan wax ka yar saacad.
Waxaa sharaf noo ah in dad badan oo iskaa wax u qabso ah ay diyaar u yihiin inay sii wadaan jidadkooda xitaa iyadoo qiimaha gaaska uu sare u kacay. Maalin kasta, boqollaal mutadawiciin ah ayaa u baxa dhammaan Magaalooyinka Mataanaha ah si ay cunto iyo hubin badbaado ugu keenaan dadka qaata Cunnooyinka Taayirada.
KARE 11's Breaking the News wuxuu dhawaan fuulay Mike Oliver, oo iskaa wax u qabso ah oo jooga Burnsville si uu u helo aragtidiisa ku saabsan sababta ay muhiimka ugu tahay isaga inuu sii wado bixinta cuntada toddobaad kasta.
Labo siyaabood oo aad ku caawin karto
Waxaad ka caawin kartaa barnaamijyada cuntada ee Wheels inay sii wadaan u adeegida tirooyinka diiwaanka ee qaataha adiga oo ku tabarucaya ama ku deeqaya. Iyadoo inta badan mutadawiciintayada caadiga ah ay nagu xayiran yihiin inkastoo qiimaha gaaska sareeyo, Barnaamijyada Cunnada Taagerada ee Magaalooyinka Mataanaha waxay had iyo jeer raadinayaan mutadawiciin badan si ay cunto u keenaan saacadaha qadada.
Isdiiwaangeli si aad tabaruc u noqoto
Haddii aadan awoodin inaad iskaa wax u qabso, waxaad sidoo kale samayn kartaa tabaruc. Waxaad ku tabaruci kartaa guud ahaan si aad u taageerto barnaamijka, ama waxaad samayn kartaa tabaruc gaar ah oo ah $25 ama $50 kaarka gaaska si aad u taageerto mutadawiciinta Cunnada Ku Lugta.
Juun 9, 2022